“Waa In 24 Saac Lagu Soo Celiya Gaadhiga Guddoomiyaha,” Waddani | Hangool News
“Waa In 24 Saac Lagu Soo Celiya Gaadhiga Guddoomiyaha,” Waddani
Afhayeenka guud ee xisbiga WADDANI Mudane Barkhad Jaamac Batuun oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta xisbiga ayaa si adag uga hadlay gaadhiga guddoomiyaha Xisbiga WADDANI oo xukuumaddu qafaalatay iyo ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha oo looga yeedhay xeryaha ciidanka ee ay ka tirsanaayeen waxaanu tilmaamay in aan ammaanka guddoomiyaha lagu aammini doonin xukuumadda.
“Waxaad ka war qabteen in maalintii shalay gaadhiga Guddoomiyaha Xisbiga suuqa badhtankiisa wiish lagaga dhex qaatay, ciidanka ilaalada u ah guddoomiyaha Xisbigana qaar ka mid ah xeryahoodii dib loogaga yeedhay. Sababta arrintaasi u dhacday markii aanu u dhabba galnay ee aanu isku daynay in aanu xog rasmi ah ka helana waxay u muuqata xukuumaddii masuulka ka ahayd amniga dalku in ay ka badheedhayso jeexista dariiqa fawdo dalka ka dhacda,” Sidaas ayuu yidhi Afhayeenka guud ee xisbiga WADDANI.
Afhayeenku waxa uu intaasi raaciyay “Guddoomiyaha xisbigu wuxuu leeyahay ilaalo u gaar ah oo qaabilsan sugidda amnigiisa. Ilaaladaasi waxay ka tirsan yihiin ciidamada Qalabka sida ee dalka, ciidamo beeleed maaha ee waa ciidamo isugu jira booliska iyo militariga, waxa loogu deeqay dirays iyaga u gaar ah oo ay xidhaan, dirayska waxa ugu deeqay muwaadin reer Somaliland ah waxaana loo keenay magaalada Saylac waanay ka doonteen, taliska guud ee ciidamada Qaranku warqaddii uu ku amray in la soo siiyo diraysku waa tan waana warqad taliska ka soo baxday oo ah 16 dirays ah oo ay soo qaadaneyeen, warqadda wasaaradda Maaliyaddu ku farayso qaybta Kastamaduna waa kan oo waxaa ku yaalla saxeexa agaasimaha. Labada warqadood ba waxay caddaynayaan in ciidanka ilaalada guddoomiyuhu sharciga raaceen. Nasiib darro waxa dhacday markii ay soo qaateen dirayskii ayaa lagu dhex qabtay badhtanka magaalada iyada oo tixraacooda iyo cidda ay ka tirsan yihiin ba la garanayo.”
“Xukuumadda waxaanu u sheegayna haddii masuuliyaddii amniga guddoomiyaha ee ay iyadu wakiilka ka ahayd ama ciidankii Qaranka ee isugu jiray militariga iyo booliska ee amniga guddoomiyaha sugayay ka xisbi ahaan aanan ku aamminayn ammaanka guddoomiyaha oo ay dadkii taageerayaasha u ahaa ilaashan doonaan xasaanadda iyo xilka guddoomiyuhu hayo oo iyagu masuul ka yihiin oo aan lagu hallayn doonin nidaamkan xukuumaddeed ee dalka maanta taladiisa haya.
Ta labaad waxay qadaf, nabar iyo boog ku tahay oo ay xanaf xun ku abuuraysa taageerayaasha iyo sharafta xisbigu leeyahay in gaadhiga guddoomiyaha hadh cad wiish lagu qaado sida baabuurta Qaraxda oo birmadka la geeyo.
Waxaanu ugu baaqayna nidaamka xukuumaddan maanta talada haysa afar iyo labaatan saacdood gudahood in ay gaadhiga guddoomiyaha ku soo celiso raalli gelin buuxdana ka bixiso falkaa foosha xun ee ay kula kacday xanaadda iyo haybadda guddoomiyahu qaranka ka mudan yahay.
Waxaanu ku dhiiri gelinayna taageerayaashayada oo aanu ku xanto xantaynayna xumo aan qalbigiina ku jirin in aan la idinku abuurin mana tihidin kuwa bartooda looga soo dhacayo Qaranka. Waxa uu guddoomiyuhu astaan idiinku yahay isku haynta, sharafta iyo wadida shacabka Somaliland waxaanu damac kaga jira hayaanka iyo halganka hoggaaminta dalka,” Sidaas ayuu yidhi Afhayeen Barkhad Jaamac Batuun